ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5ဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားရန်ခြေလှမ်းများ
စုံတွဲများလွှဲမရှောင်သာလမ်းတစ်လျှောက်ဆက်သွယ်ရေးကြို့ထိုးမြင်တွေ့ရတဲ့, သူတို့အသစ်အတူတူဆယ်စုနှစ်တွဲသို့မဟုတ်ကျင်းပတော့မည်လား. ဤရွေ့ကား missteps နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ထံမှသတိအားထုတ်မှုစီမံကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ရန်ခက်ခဲရှိပါတယ်. အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို Remembering သူတို့အားနောက်ဆုံးသဘောထားကှဲလှဲမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသက်သေပြပါလိမ့်မယ်:
1. ထိုအသံတိတ်ကုသမှုကိုရှောင်ရှားပါ: အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ခုလုံးဒီနည်းဗျူဟာ၏အပြစ်ရှိ, ထိုသို့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အန္တရာယ်များနှင့်အဖျက်မယ့်. ပိတ်ပစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အထဲကသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပိတ်နေသည်, နှင့်လက်မှာအစစ်အမှန်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့အကျိုးရှိမယ့်. အဖြစ်ခက်ခဲကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်, သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြသရန်သင့်သောစကားကိုသုံး, နှင့်တိကျသောရဖို့မကြောက်ပါနဲ့. သတိရ, ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုဒုက္ခအပေါ်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သွား, သင်တို့တဘက်၌ခဲယမ်းမီးကျောက်ကဲ့သို့သင့်ခံစားချက်တွေကိုကိုမသုံး.
2. ယူဆချက်ကိုလုပ်မထားပါနဲ့: ထိုအသံတိတ်ကုသမှုပုံစံတူစာပိုဒ်, ယူဆချက်ထုတ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ချန်ထား၏နောက်ဥပမာများမှာ, ထိုသို့ရိုးရှင်းစွာဖြစ်စေလူတစ်ဦးမှတရားမျှတမယ့်. သငျသညျမိမိအတိုတောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုသူစိတ်ဝင်စားကြောင်းဆုံးရှုံးသွားသောရဲ့ဆိုလိုယူဆစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုအများကြီးအလုပ်မှာသွားခဲ့ကြပေမည်. သငျသညျကိုမေးနှင့်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းပေါ်မှာအစားအားကိုးမထားဘူးဆိုရင်, သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားရရှိမ, နှင့်သင်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်အဆုံး၌ပိုကြီးတဲ့အငြင်းအခုံတွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူထေ​​ာင်.
3. ချီးမွမ်းကောင်းအပြုအမူတွေ: အရင်ကဲ့သို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်ကဲ့သို့များများစားစားချစ်ခင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်မရကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်, အကြံပြုချက်မှတဆင့်တစ်ဦး complimentary လမ်းထဲမှာဖွင့်ဆောင်ခဲ့ကြိုးစားကြ. "ငါတကယ်သင့်ရဲ့ပွေ့ဖက်ကိုခစျြ,"နှင့်, "ငါသည်သင်တို့၏အစောပိုင်းနံနက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများလက်လွတ်,"သင်အလိုရှိကြသည်တွင်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအားပေးအားမြှောက်နှစ်ခုစလုံးကို non-ခြိမ်းခြောက်ဥပမာများမှာ. ဒီဘက်ပါ, သင်သည်သင်၏ပွိုင့်မဆို accusatory ဘာသာစကားနှင့်အတူဖြတ်ကျော်ရ.
4. သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သည်: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသူတို့စိတ်ခံစားမှုပြသလေ့. အမျိုးသမီးတစ်ဦးငိုကြွေးအော်ဟစ်စေခြင်းငှါ, တစ်ဦးသောသူသည်အငွေ့စခွေငျးငှါ. နှစ်ဦးစလုံးခိုင်လုံသောစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများမှာ, နှစ်ခုစလုံးကသူတို့ကိုခံစားရသူပိုင်. အဲဒီအစားသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြောပြထက်, "သင်ဖျင်းခံစားရစေရန်လုပ်,"တစ်ဦး accusatory ကြေညာချက်ဖြစ်သည့်, သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအပိုင်လေသံကိုရှင်းပြ, နှင့်ရှင်းလင်းချက်ပေး.
ဥပမာအားဖြင့်, ထက်လျော့နည်းအငြင်းအခုံဖြစ်သည် "သင်စကားမပြောနိုင်သောဆံပင်ရွှေရောင်ဟာသ လုပ်. သောအခါငါမိုက်မဲခံစားခဲ့ရ", "သင်အမြဲငါ့ကိုမိုက်မဲခံစားရပါစေ။ " ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလည်းသင်၏အဖက်မိမိကိုမိမိရှင်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပြီးသူ့ကိုကိစ္စကို၏အစစ်အမှန်အရင်းအမြစ်ကိုသိရပေးနိုင်ပါတယ်.
5. အပြုသဘော Stay: ဒါက toughie ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်သိသည်! အမျက်ထွက်ရသို့မဟုတ်သင်ဆိုလိုဘူးသောအရာတို့ကိုပြောနိုင်အောင်လွယ်ကူသောဒါဟာင်. အပြုသဘောနေဖို့နှင့်ကျန်းမာကိစ္စကိုဖြေရှင်းဆီသို့လုပ်ကိုင်ဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ. သေချာတာပေါ့, အမှုအရာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖွင့်မှုတ်သွားကြသည်. ဒါကအတူတူသူတို့ဘဝမျှဝေလူနှစ်ဦး၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့်. ကိုယ့်ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌အတူတကွသင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းအောက်မေ့နေဖို့သတိရ, နှင့်နှောင်ကြိုးကိုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သွင်းထား.